सदुकी र मिथकहरू - रब्बी माइकल अब्राहम
सदुकीहरू र मिथकहरू
प्रतिक्रिया > श्रेणी: विश्वास > सदुकीहरू र मिथकहरू
0 आवाज दिनुहोस् आवाज हटाउनुहोस्
नमस्ते जोसेफ ३ वर्षअघि सोधेको थियो
तिनीहरूको दिमागले तिनीहरूलाई ऋषिहरूका निर्देशनहरू स्वीकार नगर्न र केही हदसम्म तोशावलाई अस्वीकार गर्न प्रेरित गर्‍यो [वास्तवमा के थियो भन्नेमा राम्रोसँग जान्दैनन्]।
के उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तले तपाईंलाई मार्गनिर्देशन गर्ने सिद्धान्त होइन?
सदुकीहरूका बारेमा फरिसीहरूको निर्देशन वास्तवमा तपाईंको समझको लागि अर्को ऋषि गल्ती हो?
अनि तिमीलाई ताल्मुडमा किन बलात्कार गरियो [केही कारणले, जुन म अहिले सम्म उठ्न सकेको छैन]
किन सामान्य ज्ञानले हामीलाई शनिबार एयर कन्डिसनर खोल्न, वा कफीको लागि उमालेको पानीमा कुनै समस्या छैन भनेर बताउँछ?
ताल्मुड र आर्बिट्रेटरहरूको अगाडि झगडा गर्दै, म के हो र के होइन भन्नेमा एक प्रकारको "तूफाल" महसुस गर्छु, र फरकको कारण के हो?
आशा छ कि मैले आफैलाई व्याख्या गरें, किनकि म तपाईंको लेखहरूमा उजागर भएको कुराबाट साँच्चै लज्जित छु।
mikyab कर्मचारी २ वर्षअघि जवाफ दिएँ
यदि उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तले मलाई मार्गदर्शन गर्छ भने म सदुसी र बितुसी हुँ। यदि तपाइँसँग कुनै विशेष प्रश्न छ भने, कृपया यसलाई यहाँ तयार गर्नुहोस् र विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुहोस्।
नमस्ते जोसेफ ५ वर्षअघि जवाफ दिए
मैले तिमी सदुकी हौ भनेको होइन,
1. मैले भने कि आज सम्म यो मलाई यस्तो दृष्टिकोण सदुसी दृष्टिकोण हो जस्तो लाग्छ, राय / कानून / अधिकार को स्वीकृति को कमी जो टोरा को नैतिकतावादीहरु द्वारा पुस्ता देखि पुस्ता सम्म कुनै प्रमाण बिना पारित गरिएको छ। हिलेलले जादू पढ्न चाहने गेरलाई के भनेका थिए]
2. यो मलाई लाग्छ कि तपाईं हलाखिक अर्थमा रूढिवादी हुनुहुन्छ, र यस्तै
र हामी कसरी धारिलो चक्कुले काट्न सक्छौं परम्परामा के स्वीकार गर्ने र के नगर्ने
छोटकरीमा, जसरी तपाईंले मासोरेटिक पाठमा पहिलो अधिकार काट्नु भयो, त्यसरी नै सदुकीहरूले फरिसीहरूलाई मासोरेटिक पाठमा काटे।
र फरिसीहरू सही थिए भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने?
के हामीसँग फरिसीहरूको धार्मिकताको प्रमाण छ वा हामी जुवा खेल्छौं?
ק ५ वर्षअघि जवाफ दिए
Kamilta Debdihuta ले तपाइँको विकिपीडिया प्रविष्टि सम्पादन गर्नु पर्छ र तपाइँ सदुसी र बितुसी हुन सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ भनेर दाबी गर्नुपर्छ।
ए.पी. जो त्यतिबेला रब्बी श्लिताको बारेमा एक निश्चित रब्बीसँग बहस गर्दै थिए र मलाई लाग्छ कि उहाँले मलाई तर्क गर्नुभयो कि जबसम्म तपाईले भन्नुहुन्छ कि पुस्ताको वंशको लागि विचारको मामिलामा कुनै अधिकार छैन, तब सम्म तपाई सबै पुगिसके पनि। तेह्र सिद्धान्त आफैंमा केही छैन। किनभने तेह्र सिद्धान्तको विचारको ठूलो हिस्सा परम्परा हो। र बुझ्नुहोस् कि अरु म भन्दा कम स्मार्ट छैनन् ...
म न त परम्परा र रब्बीको चर्चा गर्दिन, म ग्रेड दिनमा व्यस्त छैन, परिभाषामा व्यस्त छु
म उसको दृष्टिकोण र सदुकीहरूको दृष्टिकोण बीचको भिन्नता [यदि त्यहाँ छ भने] बुझ्ने प्रयास गर्छु [तिनीहरूको बारेमा मसँग भएको जानकारीको अभावमा]
के त्यस्तो चीज हो जुन टोराका नैतिकतावादीहरू बीच पुस्तासम्म टोराहको प्रसारणको अंश हो [र हामी वैज्ञानिक तथ्यहरूसँग व्यवहार गरिरहेका छैनौं] मलाई बाध्य पार्दै, वा होइन, त्यहाँ त्यस्तो "औपचारिक" प्राधिकरण द्वारा सिर्जना गरिएको हो? टोराका नैतिकतावादीहरू पुस्ताहरूमा
मलाई अचम्म लाग्छ कि म कसरी लिखित टोराहलाई पनि स्वीकार गर्न सक्छु, किनकि यो पनि तिनीहरूद्वारा दिइएको थियो जसलाई म तिनीहरूको अधिकार स्वीकार गर्दिन।
mikyab कर्मचारी	५ वर्षअघि जवाफ दिए
तिमीले म सदुकी हुँ भनेर मैले भनेको होइन। मैले भनेको के हो भने म सदुसी हुँ वा होइन भन्ने बहस मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छैन। प्रश्न के सही हो र शीर्षक के योग्य छैन।
सिनाई वा एक योग्य संस्था (सन्हेड्रिन) बाट सन्देशमा के डेलिभर गरिएको छ वैध छ, र अरू सबै कुरा एक परम्परामा डेलिभर भए पनि मान्य छैन। एकदम सजिलो। सिनाई वा योग्य संस्थाबाट के आयो र के आउँदैन भन्ने कुरा सधैं सरल छैन, तर यो एक छलफल हो जुन प्रत्येक मामिलामा यसको आफ्नै योग्यतामा राख्नुपर्छ।
वास्तवमा, पुस्ताको परम्पराको आधारमा सृष्टि गरिएको कुराको लागि कुनै अधिकार छैन। पक्कै होइन। यसको केही वजन छ, र त्यहाँ भन्सार कानूनहरू छन्। त्यो हो। केवल भगवान वा योग्य संस्थाको अधिकार छ। वैसे, यो मेरो नवीनता होइन। यो धेरै मध्यस्थहरु द्वारा सहमत नियम हो। तर कहिलेकाहीँ तिनीहरूले यसलाई बेवास्ता गर्छन्।
तपाईं र के. (र रब्बीले पनि उद्धृत गर्नुभयो) मेरो दाबी बुझ्नुभएको छैन। मेरो तर्क यो हो कि अवधारणात्मक रूपमा तथ्यात्मक मामिलाहरूमा कुनै अधिकार छैन। तथ्यहरूको लागि, र यसले वैज्ञानिक वा होइन (मसिहको आगमन वा निजी प्रोविडेन्स पनि एक तथ्य हो) फरक पार्दैन कि यो सत्य हो भनेर मलाई विश्वस्त पार्नु र मेरो विरुद्ध प्रमाणित अधिकार दाबी नगर्नु भनेको के हो। किनकि यदि म विश्वस्त भएन भने, मलाई यस्तो पोजिसन पाखण्डी हो भनेर भन्नु के राम्रो?! त्यो हो। धेरै सरल र स्पष्ट, र त्यससँग असहमत जो कोही पनि भ्रमित छन्।
मैले यो कुरा राम्ररी बुझेको जस्तो लाग्छ, त्यसैले मैले सोधें
म अझ विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नेछु, तपाइँको अगाडि एक तथ्याङ्क पनि कसरी छ कि तपाइँ सही रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ? उदाहरण को लागी प्रार्थना को क्रम
के तपाईं अख्तियार नभएकाहरूमाथि भरोसा गर्नुहुन्न?
मिची ५ वर्षअघि जवाफ दिए
मैले तथ्यको बारेमा कुरा गरें। यहाँ बहिराको संवाद छ
जब तपाइँ तथ्यहरू भन्नुहुन्छ, के तपाइँ प्रमाण भन्न चाहानुहुन्छ?
अर्थात्, दिएको कुरालाई गवाहीको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर दिएको कुरालाई ‘आत्मविचार’ मान्नुहुन्न ?
जसरी भए पनि मैले बुझें
र यहाँ म लज्जित छु
पदहरूबाट सबै ऋषिहरूका उपदेशहरू गवाही होइनन् तर "आत्म-विचार" हुन्।
र यदि यो भनिन्छ कि Chazal एक अधिकार हो, यो Manlan हो, यो तब देखि आज सम्म टोरा को नैतिकतावादीहरु को एक आत्म-विचार होइन?
म सुझाव दिन्छु कि हामी यहाँ समाप्त हुन्छौं। तपाईले यसलाई गाह्रो बनाउनुहुन्छ जब तपाईलाई थाहा छैन कि यो के हो।
यदि मैले लेखेको कुनै खास कुरा छ र तपाईंले बुझ्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ भने, कृपया स्पष्ट रूपमा लेख्नुहोस् (स्रोत सहित) र हामी छलफल गर्न सक्छौं। म मेरो विधिको बारेमा सामान्य कथन बिना सोध्छु कि यो स्पष्ट छ कि तपाईलाई थाहा छैन।
कृपया लग इन गर्नुहोस् वा रजिस्टर तपाईंको उत्तर सबमिट गर्न
→ अघिल्लो प्रश्न
अर्को प्रश्न ←
थप 3,095 सदस्यहरू सम्मिलित हुनुहोस्
सरकारमा अरब पार्टी
Amartzim बाट प्रश्नहरू
mikyab मा बेनेटको उदय र पतन र तिनीहरूको अर्थ (स्तम्भ 486)
हानानेल मा बेनेटको उदय र पतन र तिनीहरूको अर्थ (स्तम्भ 486)
हिचकिकर को हो? मा बेनेटको उदय र पतन र तिनीहरूको अर्थ (स्तम्भ 486)